Isiqondisi Sabakhiqizi - Indawo Yemakethe ye-B2B - Ulwazi Lwabahlinzeki
Lapha at I-Alietc sizibophezele ekwakheni umhlaba wonke B2B esigcawini lokho kuhlanganisa abakhiqizi, abahlinzeki futhi abathengi, esiza ekusunguleni ubudlelwano bebhizinisi obuzuzisana nobokuhlala isikhathi eside.
Isihluthulelo sempumelelo njenge nomakhi lingaphumula ezintweni ezimbalwa, ezinye ezibandakanya imikhiqizo yakho, kanti ezinye zifaka indlela oqhubana ngayo nabazothengwa. Ukuze wandise amathuba akho empumelelo ku-Alietc, sihlanganise lokhu kube lusizo Umhlahlandlela Womkhiqizi ukukusiza ugweme amaphutha amaningi ajwayelekile enziwa lapho uzama thengisa imikhiqizo.
Isihluthulelo sokwakha ubudlelwano obuphumelelayo nabathengi ukuthola ngokweqile kwizithembiso zakho
Lokhu kusho ukuthi kungcono ukubhekana namaqiniso ngesheduli yesikhathi hhayi ukwenza izithembiso ezingamanga mayelana nekhwalithi yemikhiqizo. Ubudlelwano bokusebenza obuhle bakhiwa entweni eyodwa kuphela futhi lokho kuthembana. Ukusungula ukwethembana kufanele kube inhloso yakho eyinhloko lapho usebenza nekhasimende elisha. Okubaluleke kakhulu nokuthembela kuza ukwethembeka. Uma uhlala uthumela ngomnqamulajuqu osunikiwe, noma nangaphambilini, kungani umthengi engaya kwenye indawo, ngisho nakumuntu othumela umkhiqizo ofanayo ngenani eliphansi le-3%?
Gxila ekulawulweni kwekhwalithi
Umthengi wakho kungenzeka ukuthi ucelile kuwe ukuthola isampula yomkhiqizo (wemikhiqizo) wena Ukukhiqiza. Lawo masampula owathumelayo enzelwe ukuthi abe wukubonakaliswa kweqiniso nokwangempela kwekhwalithi yakho ejwayelekile imikhiqizo. Yonke imikhiqizo oyithumela kulowo mthengi kufanele ifane, noma ikhwalithi engcono hhayi ukukhethwa kokuthile okungcono, okunye okufanayo nangekhwalithi elibi kakhulu. Kufanele usebenzise inqubo yokulawula ikhwalithi eqinile ngaphambi kokuthunyelwa kwanoma imuphi ama-oda ukuqinisekisa ukuthi umthengi ngeke babe nesizathu sokukhononda lapho bethola i-oda labo. Nakulokhu futhi, uma uhambisa ngekhwalithi, isikhathi nezikhathi, kungani u umthengi ubheke kwenye indawo? Kushibhile kakhulu ukugcina ikhasimende kunokuthola elisha.
Khulumisana kahle nangokujwayelekile
Ukuxhumana kuyinto ebucayi yanoma ibuphi ubuhlobo bebhizinisi futhi imvamisa kuwumqondo omuhle ukuzibeka ezicathulweni zomthengi wakho uma kuziwa ekuxhumaneni nabo. Imvamisa abathengi nabakhiqizi bangabekwa izinkulungwane zamamayela ngokuhlukana, futhi lapho kwenziwa ama-oda noma amasampula eceliwe, ezinsukwini ezizayo, akukho lutho olubi kumthengi kunokuthula ngokuphelele. Noma ngabe kungocingo (ukuthintwa komuntu kwamukelekile njalo) noma ngama-imeyili, qiniseka ukuthi umthengi wakho uyazi kahle ukuthi kwenzekani nge-oda lawo.
Lapho umkhiqizo (s) sewufikile, usafuna ukuxhumana nomthengi ukuze uqiniseke ukuthi bajabule nge-100% nge-oda labo. Lokhu kubazisa ukuthi unendaba ngokweqiniso ngezinga labo lokweneliseka futhi kuzokuvumela ukuthi ukhiphe noma yiziphi izinkinga noma wenze izinguquko kuma-oda wesikhathi esizayo. Njengoba kushiwo ngaphambili, gcina ikhasimende kunoku zitholele eyodwa.
Isikhundla sibalwa kukho konke
Lapha ku-Alietc sisebenzisa uhlelo lokuphendula kwabakhiqizi, abahlinzeki kanye nabathengi. Sigqugquzela abavakashi ukuthi bashiye impendulo eqotho ngomuntu / ibhizinisi asebenze nalo. Le mpendulo ibalulekile, noma ngabe ungumthengi noma umthengisi, njengoba idumela lakho lingcono, abantu abathambekele kakhudlwana bazofuna ukwenza ibhizinisi nawe.
Kuwo wonke umuntu noma ibhizinisi osebenzisana nalo, kufanele ngaso sonke isikhathi uhlose ukuvikela isithunzi sakho futhi uhlose ukuthi bakushiyele ukubuyekeza okungu-5 * njalo uma wenza ibhizinisi nabo. Kulula ukuzuza, futhi I-EA $ IHoPhisii Ijusi Yama-Y ukukhulisa iholo lakho nge-alietc.com
Uhlu lomkhiqizo wakho
Sikunikeze wonke amathuluzi owadingayo wokwenza uhlu lomkhiqizo obamba iso. Kodwa-ke, okushoyo nezithombe okhetha ukuzisebenzisa zikuwe.
Sincoma ukuthi uchaze ngokucacile futhi ngokunembile umkhiqizo ngamunye okufanele uwuthengise, ukhumbula ukufaka lolo lwazi abathengi abangaheha kakhulu kulo.
Ungameleli ngamanga imikhiqizo noma izinsuku zokulethwa. Ngeke nje lokhu kuholele ekuthengeni umthengi wakho, kodwa kuzobabona bekhethe ukwenza ibhizinisi kwenye indawo.
Sicela wazi ukuthi uma sithola izikhalazo ezijwayelekile mayelana nomenzi, ngeke zivunyelwe ukuqhubeka nokusebenzisa ipulatifomu yokuthengisa ye-Alietc.
Akukho okushaya isithombe sekhwalithi ephezulu. Uzobona ngaphansi kokukhethwa kukho kohlu ongakufaka okukodwa, noma izithombe ezimbalwa zemikhiqizo ofisa ukuyithengisa. Ngezithombe zanamuhla zedijithali asikho isizathu sezithombe ezisezingeni eliphansi.
Ukukhetha ukuthi ungayithengisa kanjani imikhiqizo yakho ku-Alietc
Unezinketho ngendlela okhuthaza ngayo imikhiqizo yakho. Uma usebenza endaweni encintisana kakhulu, kungenzeka ungathandi ukwembula intengo yakho, noma kungenzeka ukuthi unikeze ngezaphulelo ezikhangayo kakhulu ngama-oda amaningi / okuphindwayo. Uma ukhetha ukugcina uhlangothi lwezezimali luyimfihlo, mane umane ubeke ukuthi “Xhumana nathi ngentengo enhle”. Lokhu kubuye kusebenze kahle kwimikhiqizo enenani layo elingashintsha ngokuhambisana namandla emakethe nezindleko zezinto ezingavuthiwe.
Ngenye indlela, unganikela ngomkhiqizo wakho ngokucela ukukunikezwa kepha unganikeli ngentengo (yize umhlahlandlela wentengo ungaba wusizo). Yenza abantu bakhokhise kumikhiqizo yakho futhi ngaleyo ndlela ungavula izingxoxo, into engenzekile uma unikezela ngentengo ethile.
Ukuthengisa ngentengo emisiwe kungasebenza kahle uma wazi ukuthi intengo yakho incintisana kakhulu, futhi ufuna ukushaya izimbangi zakho.
Ukuthola izicelo kubathengi
Yonke imikhiqizo oyibalile njengeyenziwe yinkampani yakho izotholakala kunjini yethu yokusesha. Ngenxa yalokho, uma umthengi efuna umkhiqizo othile futhi ekubona uwukhiqiza, azokwazi ukukuthumela isicelo ngentengo.
Ukukhetha ibanga lakho lobulungu
Sakhe amazinga amathathu obulungu, elinye lawo okufanele lilingane ngokuphelele. Ukukhetha kwakho kobulungu kuzoncika kunani lebhizinisi nenani lemikhiqizo ofuna ukuyithengisa endaweni yesikhulumi se-Alietc. Sidinga ukuthi ube yilungu lesiteji se-Alietc ukuze uqinisekise ukuthi uyibhizinisi leqiniso nokuthi umkhiqizo (okuthengiswayo) othengisayo uwangempela. Lokhu kusebenza kakhulu kwinzuzo yakho njengoba ku-Alietc ngeke kudingeke ukuthi uncintisane nezinkampani ezingadumile.
Ukusuka ezingutsheni kuya kokwenza ubumba, ifenisha kuya kumabhola wezinyawo, okokusebenza kwe-elekthronikhi kukho konke okunye, noma yini oyenzayo, isihluthulelo sempumelelo yebhizinisi lakho ukuthola abathengi bemikhiqizo yakho bangempela, abazimisele nabanakho.
Noma ngabe kukhiqizwa uku-oda, noma ukukhiqiza amasheya ongawathengisa emakethe evulekile, i-Alietc ingakusiza. Ukuhlolisiswa okufushane kwewebhusayithi yethu kuzokubonisa ukuthi sizimisele kangakanani ukuxhumana nabathengi kanye nabaphakeli nabakhiqizi, ikakhulukazi abenzi bemikhiqizo ethile.
Sikufeza kanjani lokhu? Ngokuqondisa kakhulu amagama angukhiye ngamasu we-SEO aphumelela kakhulu (ukusesha okusebenzayo kokusesha), singakwazi ukuqinisekisa ukuthi bonke abathengi bemikhiqizo yakho bayazi ngobukhona bakho nokuthi yini okufanele uyinikeze.
Okubalulekile futhi ukuqonda ukuthi unokulawula ngokuphelele ukuthi uthengisa imikhiqizo yakho futhi kubani, futhi ngentengo yani. Izimakethe zingashintshashintsha ubusuku kanye nokuba namandla namathuluzi okusabela, manjalo, ezishintsheni zemakethe kuzokuqinisekisa ukuthi uthola imiphumela oyidingayo, isikhathi nesikhathi futhi.
Uma usubhalisele i-Alietc, uzokwazi ukudala iphrofayela yakho.
Sicela uthathe isikhathi esincane ukwakha iphrofayela ebamba iso ezoheha abathengi abangabakhona - sidale Umhlahlandlela olusizo Wokudala Iphrofayili yakho ye-Alietc etholakala kuphela kumalungu. Kanye neminye imihlahlandlela yomsebenzisi engabalulekanga, umhlahlandlela wokudalwa kwephrofayela yakho uzokusiza ukuthi ushaye phansi ugijime futhi ugcine isikhathi sakho ngokungadingekile.
Lapho usuqedile iphrofayili yakho, manje ususethubeni lokuqala ukuthengisa imikhiqizo yakho, esiyenze lula ngangokunokwenzeka ukuyenza. Ubuhle be-Alietc ukuthi sifuna ukwenza yonke into ibe lula futhi isebenze kahle, ngakho-ke unezinketho ezimbili, noma ungathumela izinketho zombili.
Indawo yemakethe eyodwa ye-B2B DIGITAL, Izilimi ezi-105 ezihlukene
Ukuvela njalo kobuchwepheshe nezinzuzo zako ezahlukahlukene kuye kwenza i-ALIETC ukuthi isebenze ngokusebenzisa amawebhusayithi enethiwekhi angama-105 ngezilimi ezahlukahlukene ezingama-105, kufaka phakathi isiShayina, isiJalimane, isi-Arabhu nesiFulentshi.
Umqondo osuselwa kule ndlela eyahlukahlukene yokusebenzisa izilimi eziningi ukwenza ukuthenga nokuphequlula komkhiqizo kube lula kakhulu futhi kusebenza kahle kuwo wonke umuntu, noma ngabe ungowasiphi isizwe.
Lapho umphakeli efaka umkhiqizo, incazelo yawo izovuselelwa ngokuzenzakalelayo ezilimini ezihlukile eziyi-105, kumawebhusayithi ayi-105.
Le nqubo esheshayo, ezenzakalelayo izoba nomphumela wokuheha abathengi abaningi ngokwengeziwe abavela emazweni ahlukahlukene emhlabeni wonke, ngaleyo ndlela bevula indlela yempumelelo emakethe ephumelele kakhulu egxile ekubalulekeni kokufinyelela kwisisekelo sabasebenzisi bamazwe amaningi.
Ngoba ngeke usebenzise i-Alietc ngaphambili, kungenzeka ukuthi unemibuzo eyengeziwe ofuna ukuyiphendula. Noma ngabe ngabe ufuna muphi umbuzo, silapha ukukusiza, ngakho-ke uthole ukuxhumana futhi sizosabela ngokushesha.
I-Alietc - Okungaphezulu Kakhulu KwezeMakethe eku-inthanethi
Imikhiqizo Yepulazi - Izithelo, Izithelo njll
Ukulima - Izimbali, Izitshalo nemikhiqizo ehlobene
Imfuyo, Izinkukhu, Inyama Nemikhiqizo Yezilwane
Izesekeli zeBar neMikhiqizo Ehlobene